တရုတ် LH-BM1000L 1-6 အလွှာရေတိုင်ကီ Blow Molding စက် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |Luhong
LH-BM1000L 1-6 Layers Water Tank Blow Molding စက်
1000L ရေစည်မှုတ်ပုံသွင်းစက်သည် PE & HDPE ရေတိုင်ကီများကို 200L မှ 500L အထိ၊ 1-6 အလွှာရှိ ရေတိုင်ကီများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
1. Seimens PLC မှ ထိန်းချုပ်ထားသော အပူချိန်၊ အပူပေးကိရိယာ သို့မဟုတ် သာမိုကွိုင်များ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် အပူချိန်ကျသွားပါက ဖောက်ထွင်းစက်သည် အလိုအလျောက် ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
2. Diehead တွင် Diehead ဖိအားစမ်းသပ်ခြင်းရှိပါသည်။ PLC သည် အသေခေါင်းအတွင်းရှိ ဖိအားများလွန်းပါက PLC သည် extruder များကို ပစ်ချသည်။
3. အဆိုပါ extruder များတွင်အပူချိန်ထိန်းထားရန်အဖုံးများပါရှိသည်, ဒါကြောင့်အပူအချိန်တိုစေနိုင်ပါတယ်။
4. အပူချိန်ကို Siemens အမှတ်တံဆိပ်မှထိန်းချုပ်ထားသည်။
5.Extrusion motor သည် Siemens အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
6. အင်ဗာတာသည် Seimens အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
2. Multi-Layers Die Head နည်းပညာ
နံရံအထူသေချာစေရန် ပေါင်းစပ်ထားသော Multi-layer Die Head ဒီဇိုင်းအသစ်ကို 1 အလွှာမှ6အလွှာအထိ အသုံးပြုပါသည်။ လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည် သမားရိုးကျ လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်ထက်5ဆ တိုးတက်စေပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်း၏ အသုံးချမှုနှုန်းသည်4ဆ တိုးတက်ပါသည်။
3. After Sales Service ၊
ဝယ်ယူသူသည် စက်လည်ပတ်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ရိုးရှင်းသော ပြုပြင်မှုများအပါအဝင် လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏အော်ပရေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့ စေလွှတ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းကာလများတွင် ဝယ်ယူသူ၏စက်ရုံတွင် ဝယ်ယူသူ၏အော်ပရေတာများကို လေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည်။
ရောင်းသူသည် ဝယ်သူ၏ စက်ရုံတွင် တစ်ပတ်ကြာ စက်များ တပ်ဆင်ရန်နှင့် ချိန်ညှိရန် တောင်းဆိုချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးကို စေလွှတ်နိုင်သည်။ ဝယ်ယူသူသည် စက်များ မပို့ဆောင်မီ ကြိုတင်မှာကြားထားသင့်သည်။
ဝယ်သူသည် မထွက်ခွာမီ အင်ဂျင်နီယာ၏ ဗီဇာလျှောက်လွှာကုန်ကျစရိတ်၊ လေယာဉ်အသွားအပြန်၊ အစားအသောက်နှင့် ဘုတ်အဖွဲ့အတွက် ပေးဆောင်ရပါမည်။
3.LH-BM1000L လေမှုတ်ပုံသွင်းစက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
1200 × 1600 မီလီမီတာ
ယခင်- LH-BM160L 1-3 အလွှာများ ထိပ် Drum Blow Molding Machine ကိုဖွင့်ပါ။
နောက်တစ်ခု: LH-BM2000L 1-6 Layers Water Tank Blow Molding စက်
LH-BM10000L 1-6 Layers Water Tank Blow Molding...